Duqa Muqdisho oo ka hadlay banaanbaxyadii ka dhacay Caasimada - Home somali news leader
Home NEWS Duqa Muqdisho oo ka hadlay banaanbaxyadii ka dhacay Caasimada
Duqa Muqdisho oo ka hadlay banaanbaxyadii ka dhacay Caasimada
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed ( filish) ayaa ka hadlay banaanbixii rabshadaha watay ee ka dhacay shalay degmooyinka magaalada Muqdisho.
Guddoomiye Cumar filish waxaa uu sheegay in dadkii shalay banaanbaxay ay ku jireen maleeshiyaad hubeysan oo hub watay, kuwaasna uu sheegay inay kasoo horjeedaan go’aankii dowladda Soomaaliya ay xiriirka ugu jartay Kenya.
“Mar haddii dadkeenii uu noqday kuwo u jilicsan cadawga, kuwo annaga naga mid ah oo ayaga ay leeyihiin ayaa rabshado bilaabay, Waxaan baraha bulshada ku arkay kuwo Indhaha uu u duuban yahay, waana kuwo u adeegaya Kenya ayuu yiri” Guddoomiye Filish.
Sidoo kale guddoomiye Cumar Filish ayaa ka digey in la burburiyo wadooyinka laamiga ah ee laga dayactiray magaalada Muqdisho.
Warka Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed ayaa waxaa uu ka mid yahay hadalo kulkulul oo ay qaar ka mid ah madaxda dowlada federalka ugaga hadleen banaanbaxyadii ka dhacay Muqdisho.
Previous articleEurope faces stricter Covid-19 restrictions amid fears of rising Christmas
Next articleMaxkamada Ciidamada oo dil ku xukuntay labo ruux oo dil geystey